Kheyre iyo wefdi uu hogaaminayo oo gaaray Jowhar • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hirshabelle / Kheyre iyo wefdi uu hogaaminayo oo gaaray Jowhar
Kheyre iyo wefdi uu hogaaminayo oo gaaray Jowhar
October 15, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Wefdi uu hogaaminayo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goor dhawayd gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeele.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle,xildhibaano DF iyo dadweyne farabadan ayaa Ra’iisul wasaaraha iyo wefdigiisa kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar iyadoona loo gudbiyay xarunta madaxtooyada maamulka Hirshabeelle.
Ujeedka safarka uu Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ku tagay magaalada Jowhar ayaa lagu sheegay ka qeyb galka munaasabad dhagax dhiga mashaariic laga hirgalinayo Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar.
Inta Ra’iisul wasaaraha uu ku sugan yahay magaalada Jowhar waxaa la filayaa in halkaasi uu kulamo kula qaato madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle oo uu ugu horeeyo madaxweyne Waare iyo golayaashiisa dowlada iyo barlamaanka.
Sidoo kale waxaa la filayaa in Ra’iisul wasaaraha uu halkaasi kulamo is xogwareysi ah kula qaato qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle.
Safarka Ra’iisul wasaaraha uu ku tagay magaalada Jowhar ayaa ku soo beegmaya xili maamulka Hirshabeelle uu soo celiyay xiriirka wada shaqeyneyd ee uu la lahaa dowlada federaalka tan iyo markii uu ka baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada.